Mpamatsy sy orinasa mpamatsy solika - Mpanamboatra orinasa Slashers & Mowers
Detail Product Ampiasaina indrindra izy ireo amin'ny fanapahana bozaka, fanangonam-bary, fitantanana pastora, fanamainana bozaka, sns. Afaka misafidy motera diesel na motera lasantsy ianao ho herinaratra ho an'ny famaritana ara-teknika Fitaovana mifanaraka amin'ny herin'ny kw 4.8 Famindrana CC 196 Manapaka ny sakany mm 60/80/90 / 100 / 120mm tsy voatery hisongadina Haavo mirefy 20-80 ...
Antsipirian'ny vokatra Ny slasher rotary dia mety amin'ny fanadiovana sy ny famaohana ny ala sy ny ahitra, ary koa ny fanatsarana ny tanimboly tsy mitovy. Ny masinina dia siantifika amin'ny famolavolana, maharitra amin'ny serivisy, mora ampiasaina sy mitazona, azo ovaina amin'ny haavon'ny fanapahana ary manana fahombiazana miasa tsara, masinina fambolena tsara kokoa ho an'ny fambolena ahitra sy fanadiovana ny toeram-piompiana izy ireo. Famaritana teknika Model Unit SL2-1.2 SL4-1.5 SL4-1.8 Niasa sakan'ny mm 1200 1500 ...
Product Detail 9GB andiany famerenana moka dia ampiasaina amin'ny fijinjana ahitra amin'ny toeram-piompiana, ala na amin'ny tany tan-tany. Miasa eo amin'ny havoana, saha midadasika na saha kely izy io. Izy io dia mifehy ny mpamily traktera ary manana fahombiazana miasa tsara izy io, ny mower iray manontolo dia azo alaina amin'ny systerm pressure pressure rehefa miampita ny sakana ny traktera. Fizarana teknika famaritana santionany 9GB-1.2 9GB-1.4 9GB-1.6 9GB-1.8 9GB-2.1 Niasa sakan'ny mm 1200 1400 1600 1800 2100 ...